हाम्रो बारे - Zhangjiagang रिचिंग मशीनरी कं, लिमिटेड
Zhangjiagang रिचिंग मसिनरी मेकानिकल उत्पादन र बेच्न मा छ, विशेष गरी प्लास्टिक मेशिनरी मा विशेषज्ञ छ। हाम्रा लगानीकर्ताहरूले धेरै वर्षदेखि प्लास्टिक उद्योगको क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन।
हाम्रो व्यवसायले प्लास्टिक धुने र रिसाइक्लि equipment उपकरण, extruder, shredder मेशिन, निचोल्ने मेसिन, प्लास्टिक मेशीन को लागि स्पेयर पार्ट्स आदि उपकरणहरू समावेश छन्।
- हाम्रो फाइदा -
हामी प्लास्टिक उद्योगको क्षेत्रमा सबैभन्दा अनुभवी इञ्जिनियर जम्मा गर्छौं, हामीसँग बिक्रीको पछाडि सेल्सम्यान र सेवा गर्ने व्यक्ति छन, जसले राम्रो संचार कौशल र लिखित तथा बोलिने अंग्रेजीमा राम्रो अभिव्यक्ति क्षमताको साथ टेक्नोलोजीलाई राम्रोसँग बुझेका छन्।
लागत र मूल्य
हामी (सबै लगानीकर्ताहरू) अपस्ट्रीम स्पेयर पार्ट्सका लागि आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण गर्छौं, बिक्री प्लेटफर्म र मानव संसाधन र ईन्जिनियरमा पनि साझा गर्दछौं, जसले उत्पादन लागत, व्यवस्थापन लागत र बिक्री मूल्य घटाउँछ।
हाम्रो उद्देश्य प्लास्टिक उद्योग मेशीन क्षेत्रको ग्राहकहरुका लागि वन स्टप सोर्सि platform प्लेटफर्म, सेवा प्लेटफर्म र टेक्नोलोजी समर्थन मञ्च निर्माण गर्नु हो। कलिट्सलाई खरीद लागत घटाउन मद्दत गर्नुहोस्, गुणवत्ता नियन्त्रण गर्नुहोस्। क्लिट्सलाई चीनमा कारखानाबाट खरीद गर्न निर्देशन दिन मद्दत गर्नुहोस्। ग्राहकहरू र हाम्रो लगानीकर्ताहरू बीच एक पुल निर्माण गर्नुहोस् (मध्यम साना कारखाना)
हामीसँग क्वालिटी लेवलमा प्रतिबन्धित प्रदूषण प्रक्रिया छ। डेलिभरी अघि प्रत्येक विस्तृत उपकरणहरूको लागि, हामीसँग प्रमाणिकरण गर्न हाम्रो इन्जिनियर पनि छ।
हामी केवल एक उत्पादक र विक्रेताको रूपमा फेला पार्दछौं, ध्यान दिनुहोस् तर सेवा-सहायता ग्राहकहरूलाई सस्तो मूल्यको साथ क्वालिटी उपकरणहरू लिन, ग्राहकहरूलाई कुनै चिन्ता बिना खरीद गरौं।
१. स्थापनाको लागि आवश्यक ईन्जिनियरिंग सर्तहरूको सिफारिश गर्दै
मेशिन र उपकरणहरूको
२. समयको निर्माण प्रक्रियामा कम्युनिकेट गर्दै
प्रयोगकर्ताको साथ मेसिन
Technical. प्राविधिक सर्तहरूमा सहयोग प्रदान गर्दै, पेंच संयोजन
र उत्पादको लागि ब्यारेल स्वभाव आवश्यक छ
१. स्थापना, कार्य र प्रशिक्षणमा स्प्याटिक सहयोग पुर्‍याउँदै
२.Filing ग्राहकको जानकारी मा
Long. दीर्घकालीन मर्मत सेवा र स्पेयर पार्ट्स प्रदान गर्दै
New. नयाँ उत्पादको विकासका लागि ग्राहकलाई टेक्निकल समर्थन प्रदान गर्दै
P. एक बर्षको लागि नि: शुल्क मर्मत प्रदान गर्दै